Iibso A -Line Halter Strapless Polka Dot Maxi Sundress ee Dumarka - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
A-Line Halter Strapless Polka Dot Maxi Sundress ee Dumarka
Color Dark Blue Royal Blue Black Brown cagaaran Boor Jaale 100 Polyester Casaan 100 Polyester Red Dark Red Yellow Daabacaad cagaaran Daabacaad buluug ah Ubax casaan buluug ah Daabacaad madow Daabacan cad Ubax casaan cad
Dark Blue / XL Dark Blue / L Royal buluug / M Royal buluug / S Black / XL Black / L Dark Blue / M Madow Mugdi / S Brown / XL Brown / L cagaaran / M cagaaran / S Royal buluug / XL Buluug Royal / L Brown / M Brown / S Beige / XL Boor / L Black / M Black / S Boor / M Beige / S Jaalaha 100 Polyester / XL Jaalle 100 Polyester / L Casaan 100 Polyester / XL Casaan 100 Polyester / L Jaalaha 100 Polyester / M Jaalaha 100 Polyester / S Red / XL Red / L Guduud Madoow / M Guduud Madoow / S cagaaran / XL cagaaran / L Red / M Red / S Yellow / XL Yellow / L Casaan 100 Polyester / M Casaan 100 Polyester / S Guduud Madoow / XL Guduud Madoow / L Yellow / M Yellow / S Daabaca cagaaran / S Daabacaad cagaaran / M Daabacaad cagaaran / L Daabaca cagaaran / XL Daabacaad buluug / S Daabacaad buluug / M Daabacaad buluug / L Daabacaad buluug / XL Ubax casaan buluug / S Ubax casaan buluug / M Ubax casaan buluug / L Ubax casaan buluug / XL Daabacaad madow / S Daabacaad madow / M Daabacaad madow / L Daabacaad madow / XL Daabacaad cad / S Daabacaad cad / M Daabacaad cad / L Daabacaad cad / XL Ubax casaan cad / S Ubax casaan cad / M Ubaxa Pink cad / L Ubaxyo casaan cad / XL
A -Line Halter Strapless Polka Dot Maxi Sundress ee Dumarka - Buluug Madow / XL gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Moodalka: DS5707
Qaabka Gacmo-galeenka: Xarrago la'aan
Qurxinta: Xarkaha/ Boodhka/ Qaansada
Nooca Qaabka: Daabacaadda Ubaxa/Dhibicda Polka
Waxyaabaha dharka ah: 85% cudbi, 15 caag ah
Qalabka Fabric 02: Ubaxa cas, ubaxa jaalaha ah 100% polyester
Ogow: Fadlan si taxadar leh u raac tusaha qiyaasta cabbirka si aad u dooratid cabbirka. Ha u dooran sida tooska ah sida caadooyinkaaga. Wali ma hubo cabirka? Waxaan jeclaan lahayn inaan kugula talinno adiga oo ku saleynaya cabirkaaga buska, dhexda, iyo sinta. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 2-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso. Soo jeedin ah in gacmaha lagu dhaqo biyo qabow. Waxay ka caawin kartaa walxaha inay ilaashadaan qaabkooda.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 105
Labbis qurux badan. 100% polyester LAAKIIN waxaad u malaynaysaa inay suuf tahay! Tayada aadka u fiican. Aad baan u faraxsanahay. Waad ku mahadsan tahay woopshop.
Aad bay u fiican tahay laakiin midabku isma laha waxaan dalbaday dubbe iyo bino ocher laakiin waan ka helay
Labbis qurxoon sida sawirka ka muuqata. Suunka aan xirto waa kaygii waxaan haystaa cabbirka S. Halka aan aad uga xumahay waxaan ka soo ceshaday labadaydii dhar oo ku teedsan meel ka fog guriga.
Ka -reebitaan tayo leh! Taille tres bien Un tres bon vendeur, j'ai commandé 2 fois et toujours tres qanacite
Waxay u timid si dhakhso ah, iyo tan ugu muhiimsan tayada! Staple, 95% suuf, si fiican loo tolay, badhanka firaaqada ah. Cabbirka s ee Ruushka 42-44. Weyn !!!!!